Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Nei UK Train atasve mitengo saka yakakwirira? UK Chitima kuchovha mitengo yakakwira zvakanyanya. Europe anonzi kuti yakanaka chitima nzendo munyika. zvakatipoteredza noushamwari chitima nzendo mu Europe ine nzvimbo dzokuona dzakanaka. Dzidzisai vanhu kuwana kwose kwose vachibva kure nemisha kuti…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Chii chicha kukurudzira iwe kutora rwendo rwechitima kupfuura kutarisa mafirimu anonakidza Aine Zvitima? Tora Kutarira kwedu pasi yakanakisisa Movies dzine Zvitima, uye tweet isu pa @saveatrain uye utiudze kuti ndeapi awakaona uye kana iwe wakavada…